PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-01-08 - ULALA NAMI NGISHO NGIGULA
ULALA NAMI NGISHO NGIGULA
Ilanga langeSonto - 2017-01-08 - Izindaba -
PASTOR, ngifisa ungeluleke ngomshado wami. Selokhu sashada nomyeni kalipheli iviki kumnandi. Sengize ngithi mhlawumbe yimi engimhlukumezayo ngendlela enza ngayo.
Uvele athi uyabona ukuthi mina kangimthandi nhlobo, abuze ukuthi kungani ngingamdivosi, esho ngibe ngimnika lonke uthando lwami. Kangimazi kanti ufuna nhloboni yothando lo muntu ngoba ngisho ngabe ngigula kanjani kepha uyalala nami.
Uma ngithi kangifuni futhi kangiphilile angibuze ukuthi ngangivemelani ukushada.
Nginokuphathwa yisinye kwesinye isikhathi ngendlela yokuthi noma ngiyochama ngiyabikelwa kepha yena alale nami kunjalo. Inzima le mpilo, pastor. Nothando ngiluzwa lwehla kancanekancane. IMPENDULO: Obhekene nakho kubuhlungu futhi akwehli kahle. Yingakho uma abantu beshada kufanele bazi ukuthi lo mshado abakuwo bayizingane ezidinga umuntu omdala ukuthi awugade futhi awukhulise.
Umshado ongagadiwe udliwa zinkukhu. Ngiyacabanga ukuthi umyeni wakho udinga umuntu omdala amhloniphayo ozombonisa ngesimo obhekene naso futhi amkhulise njengendoda ekutheni umshado awukho ngomuntu oyedwa kodwa ungowabantu ababili.
Zama ukuthola ukuthi umyeni wakho ngubani amhloniphayo noma amesabayo, omdala, ucele usizo. Uma kungenjalo ungangishiyela umqhafazo kule nombolo yami engezansi ukuze sibone ukuthi abazemindeni noma osonhlalakahle bangasiza kanjani ukumbonisa.